ویژه‌نامه‌အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ویژه‌نامه‌
((အက္က်ရမွန်း(န))) أکرمٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၃:၁၈ ညနေ
ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ဗရီးအွန်း(န))) باریءٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၃:၀၆ ညနေ
((ဗဒီးအွန်း(န))) بدیعٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၅, ၂၀၁၅ - ၂:၁၄ ညနေ
((ဗာကီယွန်း(န))) باقیٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၅, ၂၀၁၅ - ၂:၁၀ ညနေ
((အအ်လာ)) أعلی ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၄, ၂၀၁၅ - ၃:၅၃ ညနေ
((အလီယွန်း(န))) علیٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၃, ၂၀၁၅ - ၂:၂၅ ညနေ
((ကာဟေရွန်း(န))) قاهرٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၃, ၂၀၁၅ - ၁:၅၈ ညနေ
(( ဗဆွီးရွန်း(န))) بصیرٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၂, ၂၀၁၅ - ၁:၅၄ ညနေ
((ကဒီးရွန်း(န))) قدیرٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၂, ၂၀၁၅ - ၁:၅၁ ညနေ
(( စမီးအွန်း(န))) سمیعٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၅ - ၁၂:၄၈ နံနကျ
(( ဆွမဒ်ဒွန်း(န))) صّمدٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၅ - ၁၂:၀၂ နံနကျ
(( အာခေရွန်း(န))) آخرٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၁၂:၀၃ နံနကျ
((ရဟ်မန်နွန်(န))) رّحمنٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ရဟ်မန်နွန်(န))) رّحمنٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၅, ၂၀၁၅ - ၁၀:၁၂ ညနေ
((အလ္လာဟ်ဟို)) الله ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၁၅ - ၁၀:၄၅ ညနေ
((အလ္လာဟ်ဟို)) الله ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ရာဇက်ကွန်)) رّازقٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
စကျတငျဘာ ၁, ၂၀၁၅ - ၁၁:၄၃ ညနေ
((ရာဇက်ကွန်)) رّازقٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ဇာရီယွန်)) ذّاریٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
((ဇာရီယွန်)) ذّاریٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ရအူဖွန်)) رّؤوفٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
ဩဂုတျ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၁၀:၄၆ ညနေ
((ရအူဖွန်)) رّؤوفٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
((ရကီးဗွန်)) رّقیبٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း
ဩဂုတျ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၁၀:၄၀ ညနေ
((ရကီးဗွန်)) رّقیبٌ ဂုဏ်တော် ၏ အဓိပ္ပာယ် နှင့် ၎င်း၏ အစွမ်း သတ္တိတော်အား အကျဉ်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မအ်စူ မာဟေကွမ်း (စ.အ) မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ကို ကျင်းပခြင်း
ဩဂုတျ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၁၀:၀၈ နံနကျ
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ မအ်စူမာဟေကွမ်း (စ.အ) မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အချိန်အခါ ဖြစ်၍ လူဦးရေ သန်း၇၀ ကျော် ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် တစ်နိုင်ငံလုံး နီးပါး ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
မဂ်ျမအ် အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဆဌမ အကြိမ်မြောက် အထွေထွေ ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား / ဓာတ်ပုံများ
ဩဂုတျ ၁၅, ၂၀၁၅ - ၁၀:၅၉ ညနေ
မဂ်ျမအ် အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဆဌမ အကြိမ်မြောက် အထွေထွေ ညီလာခံ အား သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် သမ္မတ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စလေမီး ဒေါက်တာ ဟစန် ရူဟာနီ၏ အဖွင့်အမှာ စကားပြောခြင်း ပြီး အခြား အရေးပါ အရာရောက် နိုင်ငံတကာမှ အကြီးအကဲများ ကလည်း မိန့်ခွန်း များ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဟဇရသ် ရိုကိုင်ယာ သခင်မ (စ.အ) ၏ မွေးနေ့ သခင်မ၏ ရောင်ဇာ တော်တွင် ကျင်းပ
ဇှနျ ၆, ၂၀၁၅ - ၁၁:၁၃ ညနေ
ဟဇရသ် ရိုကိုင်ယာ သခင်မ (စ.အ) ၏ မွေးနေ့ သခင်မ၏ ရောင်ဇာ တော်တွင် ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံနှင့်အခြား နိုင်ငံများမှ မိုမေနီ ၊မိုနေနသ်များ တက်ရောက်နေရာ ယူခဲ့ပါတယ်။
ဇှနျ ၃, ၂၀၁၅ - ၁၁:၂၄ ညနေ
Fb စာမျက်နှာ တစ်ခု ကနေ တွေ့လို့ ၊သဘောကျမိလို့ ဤကဗျာလေးကို မူရင်းအတိုင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
အေမာမ် (အ.စ) ကအမြဲတမ်းတည်ရှိနေမှု
ဇှနျ ၂, ၂၀၁၅ - ၇:၀၃ ညနေ
ဟွဂ်ျဂျ သွလ် အစ္စလာမ်ဝလ်မွတ်စလေမီး(န) အလီအစ္စဂဲရ်ရေဇ်ဝါနီ (အီရန်) ရေးသားသီးကုံးထားသည့် အေမာမ်ဇမာန် (အ.ဂျ) ၏ ဟဒီးစ်တော် အပါး ၄၀ထဲမှာ တစ်ပါးအား အေမာမ် (အ.ဂျ) ၏ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး
မေ ၉, ၂၀၁၅ - ၁၀:၃၁ ညနေ
အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးအကြောင်းကို အနည်းငယ် ဖြစ်စေ သိရှိနားလည်းထားရန် အဗ်နာပရိတ်သတ်များ အတွက် ဘာသာပြန်ကောက်က်နှုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ သခင်မကြီး (စ.အ) ဟာ ကိုယ်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) ၏ ပထမဆုံးကြင်ယာတော်မွန်၊ အစ္စလာမ်နှင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အတွက် အန္တရယ်အသွယ်သွယ်ကိုရင်ဆိုင်ပြီး မိမိ ပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းများအားလုံး ကို လှူဒါန်းပြီး ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့သည့်ကျေးဇူင်ရှင်သခင်မကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းလေစွ သခင်မကြီး အကြောင်း အစ္စလာမ်လောကတွင် ဟောပြောရေးသားမှု သိပ်မပြုကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဧပွီ ၂၉, ၂၀၁၅ - ၁၀:၄၂ ညနေ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး ဟောကြား တော်မူ ထားသည့် ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များမှ ဒသမမြောက် ရည်ရွယ်ချက်ကို မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အားလုံးအတွက် အထူးသဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်အပေါ် အချစ်ထားသူများ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အေမာမ် ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ်တော်များ
ဧပွီ ၂၆, ၂၀၁၅ - ၁၁:၁၉ ညနေ
ရှီအာ အေမာမ် မီယာ တို့ ၏ ဆယ်ပါးမြောက်အေမာမ် (အ.စ) ၊ မအ်စူးမ် ဆယ့်လေးပါး မှ ဆယ့်နှစ်ပါးမြောက် မအ်စူးမ် ဖြစ်သူအေမာမ် အလီနကီ (အ.စ) ၏ အဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ ဟဒီးစ်တော်များ တစ်ချို့ ကို ကျနော်များ အဗ်နာ သတင်းဌာန၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် အစီအစဉ် မှ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ လူသားတိုင်း ၊ မွတ်စလင်မ်တိုင်း နှင့် ရှီအာ အေမာမ်မီယာ မွတ်စလင်မ်တိုင်း အားလုံး နားလည် သဘောပေါက်ပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို ဆုတောင်း လိုက်ပါ တယ်။
ဧပွီ ၁၉, ၂၀၁၅ - ၂:၁၀ ညနေ
အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံက အစ္စလာမ် အစစ် ဟာ ဆော်ဒီလား ? အီရန်လား ?ဆိုတာ အထင်အရှား သက်သေထူ နေပါတယ်။ပထမဓာတ်ပုံတွင် အီရန်အကြီးအကဲနှင့်ပါက
ဧပွီ ၇, ၂၀၁၅ - ၁၂:၀၂ နံနကျ
အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံက အစ္စလာမ် အစစ် ဟာ ဆော်ဒီလား ? အီရန်လား ?ဆိုတာ အထင်အရှား သက်သေထူ နေပါတယ်။ပထမဓာတ်ပုံတွင် အီရန်အကြီးအကဲနှင့်ပါကစ္စတန် နိုင်င်ငံခြားရေ ဝန်ကြီး ဟေနာရဗ်ဗာနာဂဲရ် တွေ့စဉ် သူမအား ဟေဂျာဗ် အပြည့်နှင့်တွေ့ရပြီးဒုတိယပုံတွင် မြင်သည့် အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သက္က်ရီးသ်မြို့ အတွက် အောင်ပွဲခံ / အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်သူ့တပ်မတော် နှင့် အရှာရေရ် စွန်နီကို ချီးကျူး / ဓာတ်ပုံများ
မတျ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၁၀:၁၃ ညနေ
အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ သက္က်ရီးသ်မြို့ သည်ရန်သူလက်ထဲမှ လုံးဝ လွတ်မြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ် ကြောင်းထုတ်ပြန် ကြေငြာ ခဲ့ ပါ တယ်၊ အီရတ်နိုင်ငံတော်အလံ ကို ပြည်သူ့တပ်မတော် နှင့် အရှာရေရ် စွန်နီတို့မှ တိုင်းမှူး အဆောက် အဦးတွင်လွှင့်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မကောင်းဆိုးဝါး IS (ခ) ဒါအေရှ် ထပ်ပြီး ဆီးရီးယား နိုင်ငံသား ရှီအာ မွတ်စလင်မ် ၈ ဦး ကို ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက် + ဓာတ်ပုံများ
မတျ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၁:၂၅ နံနကျ
မကောင်းဆိုးဝါး ရှိုင်တွာန် အုပ်စု IS (ခ) ဒါအေရှ် မှထပ်ပြီး ဆီးရီးယား နိုင်ငံသား ရှီအာမွတ်စလင်မ် ၈ ဦး ကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် လူမဆန်စွာ ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။